Central - 506 Homes for Sale central - Cari Homes page 3
The Central Luxury Residence (Near Inya lake)
The Central Condo Yankin Township. -Near Inya Lake,Myanmar Plaza. -High Floor. - 1286sqft -1Master Bed Rooms . - 1Single Bed Room. - 2Bath Room. - Living Room&Dining Room. - Kitchen Room. - ...
22 Jun 2021 - imyanmarhouse.com
ဒဂုံမြို့နယ်,Central City Condo Ground Floor အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး အခန်းငှါးမည်
????ဒဂုံမြို့နယ်,Central City Condo ,အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီးအခန်းငှါးမည်???? ????MBR4,BR1,Kitchen1,Ac6 ...
21 Jun 2021 - imyanmarhouse.com
ရန္ကင္း The Central Condo တြင္ အခန္း ငွားရန္ရွိသည္
- ရိုးရိုးခန္း (၂) ခန္း - ပရိေဘာဂအျပည့္အစုံ - ကၽြန္းပါေကးခင္း - အက်ယ္ (1024 sqft)
19 Jun 2021 - imyanmarhouse.com
The Central Condo မှာ အလွှာမြင့် ၊ အင်းယားကန် View ၊ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ
Unicode ---------- ???????????? The Central Condo မှာ အလွှာမြင့် ၊ အင်းယားကန် View ၊ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ နဲ့ ...
17 Jun 2021 - imyanmarhouse.com
ဒဂုံမြို့နယ်/အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး/ Central City Condo ငှါးမည်
????ဒဂုံမြို့နယ်/ Central City Cond???? ????2000sqft (5-f) ????MBR-2, BR-1, AC ????Fully Furnished ????Carparking, Gym ????Price - 1month (US$ 1600) ???? ...
Fully Furnished 3-bedroom Condo on Kaba Aye Pagoda Rd, High Floor, Bahan, near Myanmar Plaza, Inya Lake
Central Tower For Rent????09777723423
????ရန်ကင်းမြို့နယ် Central Tower ပြင်ဆင်ထားပြီး အမြန်ဌားမည် ????(1530sqft)9F 1Master Bed Room 2Bed Room/4Aircon Fully ...
14 Jun 2021 - imyanmarhouse.com
ရန္ကင္း Central Condo အိပ္ခန္း၃ခန္း Inya View အျမန္ဌားမည္-09252627576
???? ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ Central Condo ကမာၻေအးဘုရားလမ္းနဲ႔သစၥာလမ္းေထာင့္ ( Inya View) ...
The Central luxury Condominium ငှားမည်
✅ ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ The Central Luxury Condo အခန်းအမြန်ဌားမည်။ ✅ ရန်ကင်းမြို့နယ် ...
13 Jun 2021 - imyanmarhouse.com
ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Tower (1283sqft) 1MBR. 1BR A/C fully furinture အဆင့်မြင်ပြင်ဆင်ပြီး အသင့် ...
12 Jun 2021 - imyanmarhouse.com
ဗဟန်းမြို့နယ် ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းမ Marina Residence အနီးရှိ RC3ထပ်လုံးချင်းငှားမယ်နော်
Landed House for Rent (can use Office, School, Clinic, Restaurant ...) (ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမ/ The Central/ Marina Residence တို့အနီး RC_3ထပ် ...
9 Jun 2021 - imyanmarhouse.com
Kan Thar Yar Premium Condominium For Rent (Owner Direct)
6 Jun 2021 - imyanmarhouse.com
ဒဂုံမြို့နယ် ယောမင်းကြီး ကွန်ဒို အခန်းအငှားပါ
Admin please Yawmingyi area condo unit for rent. (600)$,(10)lakhs mmk Dagon township,Yawmingyi area, boyarnyunt street, condo, with lift,security guards (24)hours, (1)master bedrooms and (1) single ...
5 Jun 2021 - imyanmarhouse.com
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ​ The Central CONDO​ အခန်းအမြန်ငှားရန်ရှိပါသည် 0943081500
ရုိးရုိးအိပ်ခန်းတစ်ခန်း အဲယားကွန်းနှစ်လံုး ကားပါကင်ပါ​ ...
The Central Tower တွင် အခန်းငှားးရန်ရှိသည်
ရန်ကင်းမြိုနယ် The Central Tower (800sqft) 1BR A/C fully furinture လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ...
28 May 2021 - imyanmarhouse.com
အလုံမြို့နယ် Golden Rose Condo အခန်းဌားမည်
Ahlone, Yangon Region
Golden Rose Condo အခန်းဌားမည်။ နှင်းဆီကုန်းလမ်း /အလုံ 6th Floor -2100sqft -2 Master bedrooms, 1 Single room -5 Air-Con -Swimming Pool ...
26 May 2021 - imyanmarhouse.com
ဒဂုံမြို့နယ် ယောမင်းကြီး လမ်းအနီး ကွန်ဒို အခန်းအငှားပါ
Admin please Dagon township,Yawmingyi area Condo unit for rent. (420)$,(7)lakhs mmk Can Negotiate with lift,security guards (24)hours, car park,fully furniture (1)master bedroom and(1)single bedroom. ...
24 May 2021 - imyanmarhouse.com